01/12/2018 admintriatra 0
Mihazakazaka ny fotoana. Fantatra fa manomboka ny 4 desambra izao, ary haharitra 15 andro ny fampielezan-kevitry ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Hifanandrina amin’izany « 2è Tour » izany ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, …Tohiny
Nahery vaika ny fifandonana teo amin’ny dahalo sy ny tompon’omby. Mpanara-dia maherin’ny folo namoy ny ainy, dahalo maro no naratra mafy. Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny zandary, dia ny marainan’ny zoma izy ireo no tonga …Tohiny
Rangaina : Nifampitifitra ny polisy sy ny zandary
Nirefodrefotra ny basy. Nihorohoro ny mponina teny amin’ny manodidina ny fokontany Rangaina Avaradrano, afakomaly alina. Poa-basy indroa no nanaitra azy ireo, ka nampiantso ny mpitandro filaminana ny rehetra. Araka izany, tahotra no niainan’ ny mponina …Tohiny
Tato anatin’ny taona vitsy, manomboka mirona amin’ny maha malagasy ny mpifankatia rehefa hiditra amin’ny sehatry ny fanambadiana. Efa ataon’ny olona “theme” mihitsy ny fitafiana malagasy rehefa mariazy, indrindra ny vodiondry sy ny soratra. Na any …Tohiny
Nilaza ho tsy nahazo fampandrenesana ny amin’ny tokony hialany ao amin’ny tranom-panjakana nobodoiny aman-taonany hono i Christine Razanamahasoa. Azo avadika ho fitaovana sy paikady politika daholo moa ny zava-drehetra eto amintsika saingy ny tantara irery ...Tohiny